Ogo - Chapman Technology Co., Ltd.
Ahịa afọ ojuju bụ anyị kacha ihe mgbaru ọsọ!
Site n'echiche gaa na mmepụta, anyị raara onwe anyị nye afọ ojuju ndị ahịa anyị na ihe ọ bụla enyere na ọrụ ọ bụla enyere. Anyị ISO: 9001 Asambodo na-anọchi anya ihe karịrị a ndebanye aha site na accrediting ụlọ ọrụ; ọ bụ usoro a na-eme ka ọdịbendị dị mma na mmelite na-aga n'ihu. Anyị na-agba mbọ ịnye akụ bara uru ma na-agbagha onwe anyị oge niile iji melite ogo ogo anyị iji gafee atụmanya ndị ahịa anyị maka ngwaahịa ọhụrụ na / ma ọ bụ mmemme.
Anyị Quality Policy bụ “Ime ihe n'eziokwu na-edebe Iwu; Technology na-eduga; Akwa Ogo na arụmọrụ; Ahịa-ebute ụzọ ”. Ime ihe n'eziokwu bụ mkpụrụ obi nke ụlọ ọrụ anyị. Nzube anyị na-enye elu àgwà ngwaahịa na ọrụ na elu arụmọrụ anyị ahịa. Ahịa afọ ojuju bụ anyị kacha mgbaru ọsọ. Ka ọ dị ugbu a, ntinye anyị n’irubere iwu isi na-enye ụlọ ọrụ anyị nnukwu ihe nchebe.
Anyị Quality Management mejupụtara anọ isi akụkụ: Quality System, Quality Planning, Quality Control na Quality mma. Anyị gaferelarị ma zie ezi akụrụngwa na Ike ogo njikwa ngwanrọ iji hụ njikwa njikwa dị mma.
Nyocha uru site na imepụta ngwaahịa na ọkwa mmepe
Ebumnuche ogo Atụmatụ Ogo Ogo
Fakpụrụ Ọdịdị Design na Mmetụta Mmetụta
Usoro Nwepu Ọdịdị Nhazi na Mmetụta Mmetụta
Usoro Nkwado Mmepụta
Njikwa ogo njikwa
Ọpụpụ Ogo akara
Nyocha Uru / Nrụpụta Ihe Nrụpụta Injinia
Ngwa ihe eji atụ ihe